Microsoft yakaburitsa nyowani yekusarudzika Yekuwedzera Yekuwedzera ye Windows 10 shanduro 20H2 uye 2004, kutora iyo OS kuvaka nhamba 19042.906 uye 19041.906, zvichiteerana.
KB5000842 ine zvinotevera zvinotevera:
Inovandudza nyaya ine zoom inoitika kana uchishandisa Microsoft Edge IE Mode pane zvishandiso zvinoshandisa akawanda akakwira-DPI monitors.
Kugadziridza nyaya inoita yakakwirira simba renji (HDR) zviyero zvioneke zvakasviba zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa.
Inogadziridza nyaya inokonzeresa kuti kutamba kwevhidhiyo kuve kunze kwekuyanana mumhando mbiri kana iwe ukashandisa akawanda monitors.
Inogadziridza nyaya isingatarise chero chinhu kana kuratidza "Computing Mafirita" nekusingaperi paunosefa File Explorer mitsva yekutsvaga.
Kugadziridza nyaya inoita kuti dhizaini isashayike yekhibhodi yekubata iwe paunotenderedza chishandiso kune portrait modhi.
Inozivisa vashandisi kana account yemwana muFamily Safety plan ine mikana yekutonga.
Kugadziridza nyaya inokudzivirira kubva mukuvhara Toast Notifications uchishandisa bhatani reKuvharira pamidziyo yekubata.
Inovandudza nyaya ine 7.1 chiteshi odhiyo tekinoroji.
Kugadziridza nyaya inokonzeresa kuti mudziyo umire kushanda kana ukadzima mafaera kana maforodha anowirirana neOneDrive.
Rondedzero izere yezvinhu zvinogadzirisa uye nekuvandudza kuverenga:
Inogadzirisa nyaya ine zoom inoitika kana uchishandisa Microsoft Edge IE Mode pane zvishandiso zvinoshandisa akawanda akakwira-DPI monitors.
Inobvumira maneja kushandisa Boka rePolisi kugonesa mapfupi ekhibhodi, kusanganisira Ctrl + S, yevashandisi muMicrosoft Edge IE Mode.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira iyo icon yeToast muunganidzwa kubva kuonekwe muAction Center kana iyo icon yefaira URI iine nzvimbo.
Inogadzirisa nyaya inoita yakakwirira simba renji (HDR) skrini inogona kuoneka yakasviba zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti kutamba kwevhidhiyo kuve kunze kwekubvumirana mune duplicate mode paunoshandisa akawanda monitors.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzera kunyorera kumira kushanda iwe uchinyora mavara echiJapan uchishandisa Microsoft Japan Input Method Edhi (IME) mune inoenderana modhi.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzera kuti mudziyo umire kupindura panguva yekudzimwa kwemasanganiswa.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira vashandisi kubva kugadzirisa kana kudzima yekubata bata nekuda kwenzvimbo dzehutongi.
Inogadzira hwindo rinopa nyaya inokonzeresa mukati mehwindo kupenya kazhinji kana FlipEx ichishandiswa.
Inogadzira hwindo rinoburitsa nyaya inokonzeresa mukati mehwindo kupenya kazhinji panoshandiswa kuwanda kwendege (MPO).
Inogadzirisa nyaya neyakaiswa yeJapan inoitika mushure mekuchinja kwekutarisa pakati pemabhokisi muMicrosoft Edge.
Inogadzirisa nyaya isingatarise chero chinhu kana kuratidza "Computing Mafirita" nekusingaperi paunosefa File Explorer mhedzisiro.
Inogadzirisa nyaya inoita kuti dhizaini isashayike yekhibhodi yekubata iwe paunotenderedza chishandiso kune portrait modhi.
Inogadzirisa nyaya inokutadzisa kuvhara Togast Notifications uchishandisa bhatani reKuvharira pamidziyo yekubata.
Inogadzirisa nyaya ine murwi inodonha iyo inogona kukonzeresa Explorer.exe kuti idye yakakwira huwandu hwendangariro.
Inovandudza iyo Volgograd, Russia nguva yenguva kubva UTC + 4 kusvika UTC + 3.
Inowedzera nguva yenguva nyowani, UTC + 2: 00 Juba, yeRepublic yeSouth Sudan.
Kugadzirisa nyaya ne Windows Chiitiko Rogi Kutumira mutengi, iyo inodzosera yekutanga inoenderana chitupa pasina kutarisa zvakavanzika kiyi mvumo. Nedzidzo iyi, iyo Windows Chiitiko Log Kutumira mutengi inosarudza chitupa chemutengi chete kana iyo Network Service yaverenga mvumo yekiyi yakavanzika.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa PowerShell-based monitors kuti irege kushanda kana iwe uchigonesa kunyorera pane masystem.
Inogadzirisa nyaya inomisa BranchCache kushanda kana iwe ukamutsa Windows uchishandisa Cloud Solution Provider (CSP) rezinesi.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira Windows 10 Mahara edhisheni epamba kubva mukusimudzira kuenda ku Windows 10 Pro Dzidzo edition uchishandisa nhare mbozha manejimendi (MDM) masevhisi senge Microsoft Intune.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira maApp-V kunyorera kuti ivhure uye inogadzira kukanganisa 0xc0000225.
Inogadzirisa nyaya iyo mimwe michina yakanyoreswa neMMM sevhisi inotadza kuyananisa kana zita remugadziri wechigadzirwa riine hunhu hwakachengetedzwa.
Inogadzirisa nyaya nekushandisa yekumisikidza sevhisi sevhisi (CSP) gadziriso yekumisikidza tsika yekumisikidza yeA Audit Mamwe Logon / Logoff zviitiko. Iyo tsika yekugadzwa inotadza kushanda.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti system inomira kushanda kana pasina Trusted Platform Module (TPM) iripo muchirongwa. Kodhi yekukanganisa iri TpmTasks.dll! TrackTPMStateChanges ndeye c0000005.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa zviitiko zvinoverengeka zveappidcertstorecheck.exe kumhanyisa pachirongwa apo AppLocker inogoneswa uye iyo system isiri paInternet.
Inogadzirisa nyaya ine humbowo kutenderera kunoitika kana Windows Mhoro neBhizinesi inogoneswa.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira mashandiro ekutarisa maturusi kubva pakuratidzira yakachengetwa dhata yezvimwe chete zvinhu zvinopesana.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira iyo Chromium-based Microsoft Edge kuti isashande. Iyi nyaya inoitika kana Microsoft Edge ichishandiswa musanganiswa neMicrosoft App-V uye mafonti anogoneswa mukati meiyo chaiyo nharaunda.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa dema screen kana kunonoka kusaina kuHybrid Azure Active Directory yakabatana nemuchina apo muchina uchiedza kubatanidza kune login.microsoftonline.com.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti system irege kushanda uye inogadzira kodhi yekukanganisa 0xC9.
Inogadzirisa nyaya ine 7.1 chiteshi odhiyo tekinoroji.
Inogadzirisa nyaya inotendeukira kuCaps kukiya zvisingatarisirike kana uchishandisa RemoteApp.
Inogonesa Windows kutora zvakare akagadziridzwa eprinta kugona kuona kuti vashandisi vane chaiyo seti yesarudzo dzinosarudzika dzekupurinda.
Kugadziridza rutsigiro rwegomba chibhakera uye nzvimbo dzinoverengeka dzekudhinda mabasa nehurefu hwakareba pepa feed kuraira pane mamwe maprinta.
Inogadzirisa nyaya ine yakanyanya memory yekushandisa kana uchiita XSLT inoshandura uchishandisa MSXLM6.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzeresa File Explorer uye zvimwe zvinoshandiswa kumira kupindura kwemaminetsi akati wandei. Iyi nyaya inoitika mushure mekunge mutengi abatanidzazve kune yemakambani network uye kuyedza kushandisa mepu dhiraivha kuwana maficha masheya pane yemakambani network.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira vatengi veSevhisi Meseji Block 1 (SMB1) kubva mukuwana mugove weSMB mushure mekutangazve sevhisi yeLanmanServer.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzeresa sisitimu network sisitimu kuti imire kushanda kwenguva pfupi. Nekuda kweizvozvo, iyo network interface controller (NIC) inoiswa mucherechedzo sekutadza. Kana network ikashanda zvekare, sisitimu yacho inogona kusaziva kuti iyo NIC iri kushanda uye iyo NIC inoramba iri mukutadza.
Inogadzirisa nyaya nekusaina muiyo mudziyo uri mune ino domeini nekushandisa default mushandisi chimiro cheichi chinhu chiri mune imwe, asi yakavimbika duraini. Iyo sevhisi sevhisi yedomeini yazvino haigone kutora default mushandisi chimiro kubva kune yakavimbika duraini uye inoshandisa yemuno default default mushandisi pachinzvimbo.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti mudziyo umire kushanda kana ukadzima mafaera kana maforodha ayo OneDrive anowirirana.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira Windows kubva pakushandisa Windows 10, vhezheni 2004 vachishandisa iyo OA 3.0 kiyi mushure mekuisa KB4598291.
Inogadzirisa nyaya nekuongorora mamiriro ekuenderana eiyo Windows ecosystem kubatsira kuverengera kunyorera uye kuenderana kwechishandiso kune zvese zvinogadziriswa ku Windows.
Inobvisa iyo Microsoft Edge Legacy desktop application iyo iri kunze kwekutsigira uye inoisa iyo nyowani yeMicrosoft Edge. Kuti uwane rumwe ruzivo, ona New Microsoft Edge kutsiva Microsoft Edge Legacy naApril Windows 10 Gadziridza Chipiri kuburitswa.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira vashandisi kushandisa iyo Remote Desktop Protocol (RDP) kubatana kune Windows Server 2019 chishandiso chiri muDesktop Chiitiko maitiro.
Inogadzirisa nyaya kubvumidza vatinoshanda navo bhizinesi kuti vashande pamwe nechirongwa cheMicrosoft Support kugadzira zvigadziriso zvakagadziriswa.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa Remote Desktop zvikamu kuti zvipere zvisingatarisirwi.
Inogadzirisa nyaya ine chinongedzo cheHTTP Yekuchengetedza-Arive muAzure Front Door. Mushure mekupedza chikumbiro chekare uye mhinduro yekuchengetedza kubatana kuri kuvhurika, Azure Front Door ichaedza kushandisa zvekare kubatana kwacho. Mushure mekushaya nguva, nhangemutange inogona kuitika iyo inovhara iyo Transmission Control Protocol (TCP) kubatana. Nekuda kweizvozvo, mutengi anogona kukundikana neasina basa server mhinduro.
Inogadzirisa nyaya inokutadzisa kubva kunongedza kusvika pamakumi mashanu neshanu makoramu paunoshandisa iyo Jet Chinyorwa chisingachinjike chakarongeka sequential kuwana nzira (IISAM) fomati.
Sezvambotaurwa, ichi chiitiko chekuzvisarudzira. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuiwana kana iwe ukatarisa kuti uwane mhinduro mukati Windows Kwidziridzo, asi uchafanirwa kusarudza mukati mayo kuti iise. Kana iwe usiri kuida, shanduko idzi dzinozotenderedzwa mumwedzi unouya wePatch Chipiri kugadzirisa, izvo zvinosungirwa.
Unogona kudhawunirodha iyo yekuvandudza kubva kuMicrosoft pano kana kusarudza kuiisa kuburikidza nekutarisa maVandudziro mu Windows 10.